करियरकैलागी लक्ष्मीले दिईन् जीवनलाई डि'र्भोस र गरिन् ग'र्भपतन पनि (भिडियोसहित) - Rising Dainik
October 3, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on करियरकैलागी लक्ष्मीले दिईन् जीवनलाई डि’र्भोस र गरिन् ग’र्भपतन पनि (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । कलाकारद्धए जीवन र लक्ष्मीलाई नचिन्ने सायदै कोही होलान् । नेपाली कला क्षेत्रमा यी दुवैलाई राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारको रुपमा चिन्ने त छंदै छ । साथै यिनीहरुलाई अन्तरजातिय बिबाह गर्ने जोडिको रुपमा पनि चिनिन्छ । यी दुई कलकारले एकअर्का बिबाह गरेकै कारण परिवार र समाजदेखि बहिष्कारको नमिठो पिडा सहनु परेको छ ।
एकअर्कालाई साँचो माया गर्ने र जनमजनम संगै रहने बाचा गरेर परिवार र समाजको पनि परवाह नगरी यी दुईले एकअर्कालाई दिएको साथ, सहयोग र सम्मान सबै चक्नाचुर भएको छ । आफुलाई सबै भन्दा धेरै यदि कसैले बुझ्दछ भने त्यो हो जीवन भनेर नथाक्ने लक्ष्मीले आज उनै बुझ्नै जीवनलाई डिर्भोस दिएकी छन् । यति मात्रै नभई कलाकार लक्ष्मीले उनले आफ्नो पेटमा रहेको बच्चाको समेत ग’र्भपतन गराएकी छन् । लक्ष्मीले यो सबै केवल करियरकैलागी भन्दै गरेकी हुन् ।
करियरकैलागी लक्ष्मीले जीवनलाई डि’र्भोस दिनु र ग’र्भपतनसम्म गर्नु वास्तवमा एउटा म्युजिक भिडियोको कथाकोलागी मात्र हो न कि उनको आफ्नो वास्तविक जीवनमा । वास्तविक जीवनमा त लक्ष्मीले जीवनलाई माया गर्छिन् भन्ने त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । र जीवनले पनि लक्ष्मीलाई । यी दुईको माया एकअर्काकोलागी वास्तविक जीवनमा निकै नै अनमोल छ । २१ औं शताब्दिको समाज रुपान्तरणकोलागी यी दुईको बलिदान अन्य माया गर्ने जोडी जस्तै अमर रहनेछ ।
जाहाँसम्म डि’र्भोस र ग’र्भपतनको कुरा छ त्यो केवल ‘तिमी आउन सक्छौ’ बोलको म्युजिक भिडियोकोलागी मात्र हो । उक्त म्युजिक भिडियोमा रियल लाईभकै यी जोडिले रिल लाईभमा अभिनय गरेका छन् । सो भिडियोमा लक्ष्मी र जीवनबीचको अनबन्धका कारण उनीहरु अलग भएको देखाईएको छ भने उनीहरुको सम्बन्ध करियरकैलागी अलग भएको भन्ने भावमा उक्त म्युजिक भिडियो बनाईएको छ । सोही भिडियोमा करियरकैलागी लक्ष्मीले ग’र्भपतन गराएको देखार्ईएको छ ।
एकअर्कामा माया हुँदाहुँदै पनि जब कुरा उदाउँदै गरेको करियरको आउँछ तब धेरैले यस्तो निर्णय गरेकै कारण एकअर्कादेखि अलग हुनु परेको वास्तविक घ’टनालाई भिडियो मार्फत चित्रण गर्न खोजिएको छ । रजिना रिमालेको स्वरमा रहेको ‘तिमी आउन सक्छौ’ बोलको गीतमा निकै मार्मिक शब्दहरु रहेका छन् भने गीतको भिडियो पनि अत्ति नै उत्कृष्ट बनाईएको छ ।
काठमाण्डौ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय स’ङ्क्रमित भए पनि बन्दाबन्दी नगरी तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको छ । यही असोज ७ गते स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालका अध्यक्षतामा बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले २५ हजार सक्रिय स’ङ्क्रमित भएमा सरकार मातहत रहेका अस्पतालले उपचारको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जनाउँदै सरकारलाई बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको बन्दाबन्दी गर्ने योजना नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सक्रिय स’ङ्क्रमित २५ हजार पुगेपछि निजी स्वास्थ्य संस्था र होटेलमा राख्ने योजना सरकारले राखेको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म बन्दाबन्दी तथा भदौ ४ गतेदेखि अन्तिम सातासम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु गरेको थियो । “ मुलुकमा फेरि पनि बन्दाबन्दी गर्ने योजना रहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्थामा सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि सरकार संरचनाले थेग्न नसक्ने भनेको हो । तैपनि हामी निजी स्वास्थ्य सङ्घसंस्थासंँगको सहकार्यमा सङ्क्रमितको उपचार गर्छाैँ । ”
उहाँका अनुसार सक्रिय २५ हजार स’ङ्क्रमित भएका खण्डमा पाँच हजार लक्षण भएका सङ्क्रमित रहने छन् । तिनलाई आवश्यक शय्या सरकारसंँग छ । अहिले ८२ हजार ४५० स’ङ्क्रमितमध्ये २१ हजार २३४ सक्रिय स’ङ्क्रमित छन् । यस्तै ६० हजार ६९६ जना निको भएका र ५२० जनाको सङ्क्रमणको कारणले नि’धन भएको छ । अहिले दुई हजार ६०० सघन उपचार कक्ष, ९०० भेन्टिलेटर र २० हजार ७६५ आइसोलेसन शय्या छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका प्रतिनिधिसँग भेटी बन्दाबन्दी तत्काल नहुने जनाउँदै हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्नुभयो । व्यवसायीले विस्तारै उद्योगधन्दा खुल्न लागेका अवस्थामा फेरि बन्दाबन्दीको हल्लाले त्रसित बनेको जनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । अहिले बन्दाबन्दी खुलेसँगै सबै क्षेत्र खुला गरिएको छ । यही असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात सेवा र असोज ५ गतेदेखि हवाई सेवा स’ञ्चालन गरिएको छ ।
Breaking….त्रिशुलीमा ट्रक ख’स्यो, यस्तो छ सवार ३ जनाको अवस्था
अप्रिल फु’लमा अ’राजकता : रचनालाई श्र’द्धाञ्ज’ली ?
सभामुखलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी, प्रचण्ड त’नावमा !
June 15, 2021 Ramash Kunwar
बहिनीको हातबाट टीका थापेर अबेर घर फर्केका दाइको बीच बाटोमै गयो ज्या’न..